USimona no-Angela-Amaxesha Anzima akulindile-Ukuhla eBukumkanini
USimona kunye no-Angela-Amaxesha anzima akulindile
Inenekazi lethu leZaro di Ischia ukuya	Simona nge-8 kaMeyi, 2022:
Ndabona uMama; wayenxibe ezimhlophe kwaye esifubeni sakhe kukho intliziyo yenyama ethweswe ngameva. Umama wayenxibe isambatho esiluhlaza esigqume entloko kwaye esihla ngeenyawo zakhe ezibekwe emhlabeni. Umama wayevule iingalo zakhe ebonisa ukuba wamkelekile yaye esandleni sakhe sasekunene ephethe irosari ende eyenziwe ngokukhanya.
Makadunyiswe uYesu Kristu
“Ndikho, bantwana bam; Ndiza kuwe njengoMama – uMama wenceba, uMama woxolo, uMama wothando, uMama noKumkanikazi. Bantwana bam, ndize kuniphathela uthando, uxolo, ndize kunizisela inceba enkulu kaBawo, ndize kunibamba ngesandla ndinise kuYesu wam nothandiweyo wenu. Bantwana bam, kuyo yonke imbandezelo yenu, kuyo yonke intlungu yenu, buyelani kuye. Yiya ecaweni kwaye uguqe phambi koMthendeleko oNgcwele wesibingelelo: Ukhona, uyaphila kwaye uyinyaniso, Ukhona ekulindele. Bubeke kuye bonke ubomi bakho! Bantwana bam abaziintanda, nilindelwe lixesha elinzima; Anditsho kuba ndifuna ukunoyikisa, koko nditsho ngenjongo yokuba niqonde ukubaluleka komthandazo. Kukho imfuneko yoguquko oluyinyani hayi nje ukuthetha. Bantwana bam, ihlabathi lingenwe bububi – jonga, ntombi.”
Ndaqalisa ukubona iziganeko ezininzi zemfazwe nogonyamelo, ezoyikekayo ezenzeka ehlabathini, yaye uMama wathi:
“Ezi zezinye zezinto ezenzekayo ehlabathini, yaye yonke le nto iyayikrazula intliziyo yam: thandazani, bantwana, thandazani. Bantwana bam, ayiselixesha lencoko, lemibuzo engenamsebenzi nengenamsebenzi, lixesha lokuthandaza: thandazani niguqe ngamadolo phambi komthendeleko wesibingelelo, bantwana bam. Yiya ecaweni-uNyana wam ulinde wena apho: guqa phambi kwakhe uvule intliziyo yakho kuye, ubeke kuye ubomi bakho bonke, yonke imithwalo yakho, kwaye uya kukunika uxolo nothando, uya kukunceda woyise bonke ubunzima bakho. . Ndiyanithanda bantwana ndinicela kwakhona ukuba nithandaze. Kungokunje ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokukhawuleza uze kum.”
Inenekazi lethu leZaro di Ischia ukuya	Angela nge-8 kaMeyi, 2022:
Ngoku ngokuhlwa kwavela uMama enxibe ezimhlophe. Ingubo awayeyibhijele nayo yayimhlophe kwaye ibanzi. Kwaloo ngubo yayigqume intloko yakhe. Ezandleni zayo ibambelele emthandazweni, iNtombi Enyulu yayinerosari ende emhlophe, ngokungathi yenziwe ngokukhanya, eyayiphantse yehle ezinyaweni zayo. Iinyawo zakhe zazizé, zabekwa phezu kwehlabathi. Ihlabathi laligutyungelwe lilifu elikhulu elingwevu kwaza kwabonakala imiboniso yemfazwe nogonyamelo. Umama uthe chu kancinci watyibilika inxalenye yengubo yakhe emhlabeni, wayigquma.
“Bantwana abathandekayo, ndiyanibulela ngokuba nilapha kwihlathi lam elisikelelekileyo; enkosi ngokusabela kolu bizo lwam. Bantwana bam, ukuba ndikho nje kungenxa yothando olungaka analo uBawo ngabanye. Bantwana bam, ndilapha kwakhona ngolu rhatya ukuze ndinicelele umthandazo-umthandazo weli hlabathi liya lisanda kubanjwa ngamandla obubi. Thandazani, bantwana bam; thandazelani uxolo, olukude; Bathandazeleni abaphathi balo mhlaba banxanelwe amandla, bekude noThixo; banxanelwe ubulungisa okwenziwa ngezabo izandla.
Thandaza kakhulu ukuze bonke bafumane uxolo. Ntombi, jonga intliziyo yam: izele ziintlungu. Yiva ukubetha kwentliziyo yam (Yayibetha ngamandla). Phulaphula, ntombi, uzibeke entliziyweni yam zonke iinjongo zakho.
Ndive intliziyo kaVirgin ibetha ngamandla, kwaye ezandleni zakhe ndabona imitha yokukhanya iphuma kwaye ichukumisa abanye abakhoyo ehlathini.
"Intomba. Ezi zinceba endikunika zona ngobu busuku. Ndiza kuni njengoMama wothando lukaThixo, ndiza apha phakathi kwenu ukuze ndinibambe ngesandla ndinikhokelele kuNyana wam uYesu, okuphela kosindiso oluyinyaniso. Bantwana bam, ndiyanibongoza ukuba ningalahleki: musani ukutyhafa xa nikwizilingo nembandezelo – yomelezani ukholo lwenu ngeesakramente. Guqani amadolo nithandaze. Khangela kuYesu; Zimela ngeyona ntliziyo yakhe ingcwele. Yiya kuye – ukulindile ngeengalo ezivulekileyo. Bantwana, ngamnye kuni uxabisekile emehlweni akhe. Ndicela undimamele! Musani ukulahlekelwa zizinto zeli hlabathi, kodwa jongani kuYesu, ephila kwaye enyanisekile kwiSakramente eNgcwele yesibingelelo.
Emva koko uMama wathi, “Ntombi yam, masithandaze kunye sithandazela iBandla lam endilithandayo kunye noonyana bam abanyuliweyo nabathandwayo [ababingeleli].”
Emva kokuthandaza, uMama wasisikelela sonke. Egameni loYise, loNyana neloMoya oyiNgcwele. Amen.
← UValeria-Cela i…